Haddii aad u baahantahay daryeel caafimaad | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Daryeel iyo caafimaad / Haddii aad u baahantahay daryeel caafimaad
Waxaa jira rugo caafimaad oo badan oo kula duwan kuwaas oo aad ka raadsan karto daryeel. Dhinaca boggan waxaad ka helaysaa caawimaada in daryeel sax ah loo helo dhibta ama baahida aad adigu qabto.
Muhiim ku saabsan haddii aad u baahantahay raadsashada daryeel
Sii qaado kaarkaaga aqoonsiga
Adigu waxaad u baahantahay inaad sidato kaarkaaga aqoonsiga marka aad raadsato daryeel ama aad soo qaadanayso dawo.
Haddii aad magan-gelyo doon ku tahay Iswiidhan waa inaad sidato kaarkaaga LMA marka aad raadsanaysid daryeel. Waxaad xitaa u baahantahay inaad farmasiga tusto kaarkaaga LMA haddii aad soo qaadanayso dawo. Haddii aanad weli helin kaarkaaga LMA waa inaad tusto warqada rasiidhka inaad codsatay magan-gelyo.
Waajibka qarinta sirta ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka
Gudaha Iswiidhan dhamaan shaqaalaha dhinaca daryeelka waxaa waajib ku ah qarinta sirta. Tani micnaheedu waa in iyaga aan loo oggolayn inay waxyaabo adiga kugu saabsan uga sheekeeyaan dad kale iyagoo aan haysan oggolanshahaaga. Turjumaanada ku shaqeeya hawsha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka xitaa iyagana waxay waajib ku ah qarinta sirta. Xitaa kuwa ka shaqeeya farmasiga waxaa waajib ku ah qarinta sirta.
Turjumaada luqadaha kale
Haddii aanad ku hadal iswiidhish fiican markaasi waxaad heli kartaa caawimaada turjumaan marka aad la kulmayso shaqaalaha daryeelka caafimaadka.
Akhri dheeraad ku saabsan caawimaada turjumaanka oo ku qoran Hagida daryeelka caafimaadka ee 1177.
Sawirada loogu talogalay in lala hadlo shaqaalaha daryeelka
Waa muhiim inaad fahanto waxa shaqaalaha daryeelku sheegayo iyo in shaqaalaha daryeelku fahmaan waxa adigu aad sheegayso. Waxaa jira sawiro aad isticmaali karto marka aad la kulanto shaqaalaha daryeelka.
Aab leh turjumaado
Wac Hagida daryeelka caafimaadka ee 1177
La xiriir rug caafimaad
Badanaaba waa inaad rug caafimaad la xiriirto marka hore haddii aad xanuusato ama qabto dhib. Halkaasi waxaad ka heli kartaa caawimaada badankeeda. Waxaa kale oo aad la xiriiri kartaa rug caafimaad haddii aad caafimaad daro dareemaysid maskaxiyan. Rugta caafimaadka waxay xitaa kaa caawin kartaa in aad xiriir la yeelato rugaha caafimaadka ee cilmi nafsiga.
Hel macluumaadka xiriirka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka caafimaadka 1177.
Akhri dheeraad ku saabsan noocyada kala duwan ee rugaha caafimaadka iyo daryeelka takhasuska oo ku qoran Hagida daryeelka caafimaadka 1777.
Tag qaabilaada deg-dega
Haddii adiga ama qof kale u xanuusanayo si aad ah ama dhaawac halis ah qabo waa inaad caawimaad ka raadsato qaabilaada deg-dega. Qaabilaada deg-dega ah waxay ku taalaa isbitaal oo way furantahay maalin iyo habeenba sanadkii oo dhan.
Haddii adiga ama qof kale aad u xanuusanayo maskaxiyan oo u baahantihiin caawimaad dhakhso ah waa inaad tagtaa qaabilaada deg-dega ee cilmi nafsiga.
Wac lambarka qaylo dhaanta ee 112
Haddii ay tahay xaalad halis ah oo khatar ku ah qof naftooda waa inaad wacdo telafoon lambarka 112. Markaasi waxaad helaysaa caawimaad dhakhso ah iyo ambulaans ku kaxaynta ilaa iyo qaabilaada deg-dega. Dhanka telafoon lambarka 112 waxaad ka helaysaa xiriirka ambulaanska, booliiska iyo gurmadka dab demiska intaba.
Ku qornaanta xanuun